Shan cashar oo Kim Jon-un uu ka baran karo Trump - BBC News Somali
Shan cashar oo Kim Jon-un uu ka baran karo Trump
Image caption Kim Jong-un iyo saaxiibkiisa Dennis Rodman
Waxaa lagu wadaa in ay kulmaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, balse haddii uu kulankaasi dhoco, waxaa jira buug uu qoray Trump oo uu Kim sii akhrisan karo, kana baran karo siyaabaha uu Trump u fikiro.
Bishii June ee sanadkii 2017-kii, ninka lagu magacaabo Dennis Rodman oo ah ciyaaryahan caan ah oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa booqasho ugu tagay Kim Jong-un oo ay saaxiibo dhow yihiin.
Trump iyo Kim oo fool-ka-fool u kulmaya markii koowaad
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo caleemo qoyan u ruxay Trump
Donald Trump oo u faanay Kim Jong-un
Sida ay saaxiibada sameeyaan, Rodman waxa uu Kim u geeyay haddiyado uu ka midyahay buugga uu qoray Donald Trump ee Art of the Deal oo la qoray sanadkii 1987-dii.
Yaan laguu cago-jugleyn
Theorore Dobias waxa uu ahaa saajin ka tirsan ciidammada badda Maraykanka kaas oo markii dambe macalin ka noqday iskuul gaar loo leeyahay oo New York ku yaala.
Sanadkii 1960-kii waxaa ardaydiisa ka mid ahaa wiil yar oo lagu magacaabo Donald Trump.
Buuggiisa waxa uu Trump kaga sheekeeyay dabeecadaha macalinkaas oo uu sheegay in ay ka mid ahayd in uu ahaa qof aad u qalafsan, qofkii uu daciifnimo ka arkana ku digan jiray.
Waxa uu sheegay in isaga uu muujiyay in uusan ka cabsanaynin macalinka, balse uusan ku xad gudbin xeerarka, sidaasi darteedna uu ka heley xushmad iyo dhawrsanaan.
Xilligii uu jaamacada dhiganayay Trump waxa uu maalgashi guryo ah ku sameeyay magaalada Cincinnati, Ohio, waxaana agaasime uga ahaa guryaha nin 65 jir ah oo lagu magacaabo Irving.
Sida uu buuggiisa ku qoray Trump, Irving waxa uu ahaa nin gaaban, calool kuusan, ookiyaalo waaweyn xiran, gacmo balbalaaran, wuxuuna ahaa nin aanan qaadanin cago-jugleynta.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Irving aaday qoys kiradii iska bixin waayay, aad ayuuna ugu soo qeyliyay, wuuna kasoo tagay.
Isaga oo xafiiskiisa iska fadhiya, Trump-na uu meesha joogo ayaa waxaa xafiiskii xoog kusoo galay nin aad u weyn oo qoodh ah, oo ah aabaha qoyskii uu Irvin soo canaantay.
"Waxaan filayay in uu Irving lafihiisa la baxsado, balse ma dhicin taas, ninkii weyninka badnaa ayuuba indhaha ka galay, caayay, wuxuuna ugu hanjabay in gacmihiisa ay ka samaysanyihiin bir, xitaa booliiskana uga diiwaan-gashanyihiin in ay yihiin hub wax dila" ayuu qoray Trump oo intaas ku daray in uu aad ula yaabay sida uu Irving isu giijiyay, iskagana waabiyay ninkii labada jeer ka weynaa.
"Ma ahan in aad cabsatid, hawshaada qabso, cagaha dhulka ku xaji wax kasta oo dhaca, marnaba yaan lagu handadin" ayuu qoray Trump.
Weeydiiso wax qeyru caadi ah
Image caption Trump oo ganacsade ah
Markii uu doorashadii ku guuldaraystay madaxweynihii Maraykanka Jimmy Carter sanadkii 1980-kii ayuu Carter xafiiskiisa ugu tagay Trump isaga oo yabooh lacageed u uruurinayay maktabadiisa.
Markii uu Trump weeydiiyay lacagta uu ka doonayo, ayuu Carter ku jawaabay "$5 milyan oo doolar oo maanta u dhiganta $15 milyan oo doolar".
"Dhegaha ayaa dhub i dhahay, xitaa uma jawaabin, balse markaas ka hor maanan fahmin sababta uu madaxweyne u noqday" ayuu yiri Trump.
Inkasta oo uusan aad ugu qalmin xilka madaxweynenimada, haddane Jimmy Carter waxa uu lahaa damac iyo han sare iyo xininyo uu ku dalbado wax qeyru caadi ah, sida uu sheegay Trump.
Yeelo saamayn awood leh
Trump waxa uu aaminsanyahay in uu qofka heysto awood iyo saameyn ay u baahanyihiin dadka kale, oo aysan la'aanteed waxbo qaban karin.
Sanadkii 1974-tii Trump waxa uu doonayay in uu iibsado Hotel Commodore, balse waxaa qasab ahayd in uu ogolaansho ka helo mas'uuliyiinta dowladda hoose ee New York si ay u ansixiyaan heshiiska.
Sidaasi darteed waxa uu mulkiilayaasha hotelka ku qanciyay in ay warbaahinta u sheegaan in ay hoteelka iska xiri rabaan, maadaamaa ay ku qasaareen, kadib Trump ayaa saraakiisha magaalada ku qanciyay in hoteelkaas oo xirma ay dhibaato weyn ku tahay faras-magaalaha New York.
"Waa in aad qofka ku qancisaa in heshiiskan ay dan ugu jirto" ayuu yiri Trump.
Trump waxa uu sheegay in markasta oo uu heshiis galaya ama hawl galayo uu malaysto, isuna sii diyaariyo in ay dhacayaan wax aanan fiicney.
"Sababtoo ah waxa wanaagsan markasta waxbo kuuma dhimayaan" ayuu yiri Trump.
Balse hadda isbadalka jira ayaa ah in markii uu Trump guryaha ka ganacsanayay hadda aysan ahayn, islamarkaasna sheekada ay marayso hubka nuyuukleerka oo halistiisa badantahay.
Sidaas darteed, fikirka ah in labada ninba ay ku talogalayaan sharta ayaa ah wax aad suurtogal u ah.